Munda Spaniel Imbwa Inobereka Ruzivo - Inobereka
Iyo Munda Spaniel yakagadzirwa muEngland mukati mehafu yekupedzisira yezana ramakore rechi19 kuzadzisa kudiwa kweiyo yese nhema, yepakati, iri yakanaka-imbwa imbwa inokwanisa kana mukushanda mune gobvu chivharo kana mukutora kubva pasi nemvura. Kwenguva yakati pakange paine kuberekana kukuru pakati pemarudzi ese espaniel, uye vana vaizoguma vaiwanzo nyorwa pasi pemhando dzakasiyana dzavainyanya kufanana.
Pakupedzisira, nekuuya kwemamwe maratidziro edzimba imbwa, ma spaniel ari pasi pemapaundi makumi maviri neshanu akazivikanwa seCocker Spaniels, hombe chiropa uye chena kana nhema uye imbwa chena dzakazozivikanwa seChirungu Springer Spaniels, uye imbwa dzakasimba diki dzinopfuura mapaundi makumi maviri nemashanu dzakachengeta zita, Munda. Spaniel.
Iwo maSpanish Spaniels ekutanga muUnited States akanyorwa neAmerican Spaniel Club muma1880 uye akanyoreswa neAmerican Kennel Club (AKC) muna 1894; pakupera kwema1920 rudzi rwacho rwakange rwanyangarika kubva mumabhuku ekunyoresa AKC.
Field Spaniels yakadzorerwa kuUnited States muna 1968 apo R. Squire naC.Tuttle vakaunza vatatu kubva kuEngland. Iyi Minda mitatu uye zvinotevera zvinounzwa zvinoumba hwaro hweruzhinji rweMunda Spaniels izvozvi muUnited States. Iyo Munda Spaniel Sangano reAmerica yakaumbwa muna 1978 uye inozivikanwa neAKC seClub yemubereki yeChechi.
Kuvhima uye Kuvhima Miedzo
Yemazuva ano Field Spaniel yakasimba, iri pakati nepakati spaniel inorema 18 inches pakureba, uye inorema kubva pamakumi mana kusvika makumi mashanu emapaunzi. Yakanyatsoenzana mupfupa uye zvinhu, iwo Munda wakakura kupfuura weChirungu Cocker, asi uri mudiki pane Chirungu Springer.
Jasi rebvudzi rakareba, rakapetana, rakapenya, uye rakasviba mukugadzirwa, riine minhenga yakanaka pachipfuva, muviri, nemakumbo. Mavara ari Matema, Chiropa, kana Roan, kana chero imwe yeaya ane mamaki ematehwe.
Imbwa inoshanda, ine hushamwari, iyo Munda ine rudo uye inoda kwazvo kufadza. Ivo vakanaka kwazvo nevana nedzimwe mhuka asi zvinogona kuve zvakachengetedzwa nevasingazive. Yambiro uye inokwanisa kuhukura alarm, Minda haisi imbwa dzinorinda, kana imbwa kune avo vane 'House Yakanaka' tarisiro.
Kunyangwe kudonhedza kwemwaka kuchingova pakati nepakati, tsoka dzavo dzakakura, dzine hurefu hwakakura dzinopupurira kuda kwerudzi rwekuwana mvura, uye tsika yavo yekunwa kazhinji inosiya pasi yakatenderedza mbiya dzavo dzakazara. Ichokwadi kune yavo yekudzosera hunhu, Minda inoda kutakura zvinhu zvakapoterera mumiromo yavo.
Vanodawo kufamba, vanowanzoita ngonono, uye vanogona kuve nemhando dzakasiyana dzakasiyana. Kuti ive pane zvavanogona, vechidiki Minda vanofanirwa kudzidziswa uye kubvumidzwa kusangana nemamiriro ezvinhu asingatyisidziri sezvinobvira, kusanganisira kusangana nevanhu vakasiyana siyana nemhuka.
Kunyangwe mumakore achangopfuura pakange pasina sarudzo yekusarudza kugona kwekuvhima, iyo Munda unoramba uri wakanaka unoshanda spaniel. Kana yadzidziswa, iyo Munda inozopota muchivharo chakakora kufushira shiri, senge pheasants, zvihuta, uye chukars, zviri nyore uye dzinozvitora nemuromo wakapfava.
Mhuno yakanakisa uye mweya wakasununguka weMunda unovaita mufaro seshamwari dzekuvhima. Minda parizvino inokwikwidza mumunda uye kuongororwa kwemvura, uye kuteedzera.
Mazhinji Munda Spaniels anonakidzwa nekuratidzira uye akanaka kune mumwe munhu anoda inokwezva yepakati-saizi imbwa isina yakawanda yekushambidzika. Iyo Munda zvakare yakasarudzika sarudzo kune varidzi vanoda kubata imbwa yavo pachavo, sezvo zvichikwanisika, kana paine imbwa dzakaringana mudunhu ravo renyika, kuti muridzi-mubati apedze Munda kuenda kumakwikwi.
Minda yakati wandei yakaiswa muGroup Ring. Kudzidzisa mbwanana yekuratidza kunogona kutanga kutanga se8-12 mavhiki. Sezvimwe nechero kudzidziswa kwembwanana, kutarisirwa kunofanira kutorwa kuti usanyanya-kudzidzisa kana kunyanyisa-kuratidza.
Kufanana nevazhinji spaniels, Minda iri yakajeka kwazvo uye imbwa dzinoshanda uye kana isina kudzidziswa inogona kushatirwa uye kupinda mukuipa. Nekudaro, iwo iwo mweya wakazvimiririra unoita iyo Munda imbwa yakanaka yekuvhima inogona kuita kuti kudzidziswa kwekuteerera kuve chinetso chinonakidza.
Kana ikadzidziswa nenzira dzakanaka pazera chairo, Munda unogona kuve anofara, anohodha zvibodzwa mushandi. Iyo yakasarudzika yekuchengetedza uye kugadzikana kweMinda inovaitawo ivo vakanakisa kurapa imbwa basa.
Minda haina kuputirwa zvishoma kupfuura iwo mazhinji maspaniel, uye imwe yakachengetwa kunge chipfuwo inoda kushambidzika kudiki. Kunze kwekucheneswa uye kukweshwa, ese maSpanish Spaniels anoda zvigunwe zvavo, bvudzi riri pakati pemaputi etsoka dzavo, uye vhudzi riri mukati mezeve dzavo rakatemwa. Iyo padhi uye nzeve yekucheka haisi yekungoyevedza chete, asi ipfupi bvudzi rinooma nekukurumidza, izvo zvinobatsira kudzivirira kukura kwe eczema.
Munda Spaniels ayo anoratidzwa anoda kuwanda kwekushambadzira. Kana ikapihwa kune imbwa show mutongi, yakashambidzika-Munda inofanirwa kutaridzika yakasikwa. Clippers anoshandiswa chete mumusoro nepamberi pemutsipa, uye chero kumwe kushambidzika kunoitwa nekuchekerera kuveura uye kubvisa mapanga.
Pakazara, Munda Spaniels anonakidzwa noutano hwakanaka kwazvo. Kana matambudziko ehutano akaitika maviri akajairika matambudziko ehutano akasangana nawo chiuno dysplasia uye chirwere chetachiona.
Ehezve, imbwa dzese dzinofanirwa kuongororwa nguva nenguva nachiremba wemhuka, inochengetwa-kusvika-padanho pane zvese kupfura, kusanganisira parvovirus, uye inochengetwa padumbu rekudzivirira remoyo.
Hip dysplasia, yakajairika skeletal kuremara muimbwa dzedzese marudzi, inzvimbo inogarwa inokonzeresa kubva mukusakwana kwakaringana pakati pebhora nezvigadziko zvemajoini ehudyu. Zviratidzo zvinotangira pane imwe kusvika kune akaremara zvakanyanya uye hapana mushonga. Ese Munda Spaniels, asi kunyanya iwo anoshandiswa pakuberekesa, anofanirwa kunge aine mahudyu ma-x-ray.
Chirwere chetachiona hachisi chinhu chinotyisidzira hupenyu, uye hazvireve kuti chinokonzeresa kurasikirwa nehunhu hwehupenyu. Zviratidzo zvinogona kusanganisira kuwedzera uremu, kuneta, jasi rakashata, uye / kana ganda rine ganda. Kusimbiswa kunoitwa kuburikidza nekuongororwa kweropa uye kurapwa kunoda mishonga yezuva nezuva.
Mimwe mamiriro ezvinhu anoitika pano neapo muminda ndeye Progressive Retinal Atrophy (PRA) uye Sub-Aortic Stenosis (SAS). PRA chirwere chisingarapike chinotungamira kuhupofu. Zvakare ese maMinda, asi kunyanya ayo anoshandiswa pakuberekesa anofanirwa kuve nekuongororwa kweziso kwegore negore neanine ophthalmologist.
SAS inhaka yekugara iyo inokonzeresa kufa kamwe kamwe kwembwanana kana imbwa diki; chero maMinda anoshandiswa pakuberekesa anofanirwa kuongororwa uye kuziviswa pachena nachiremba anokwanisa.
Ectropion, kana akasununguka eyelids, uye zvakanyanya kushomeka zvakanyanya entropion, mune iyo eyelid inoshandurwa ichinanga yakananga kuziso reziso, inogona zvakare kuitika. Kana zvakakomba chero mamiriro ezvinhu angangoda kuvhiyiwa.
Kumbira mubereki semibvunzo yakawanda inodikanwa kuti akubatsire kuita sarudzo ine ruzivo pamusoro pekuti iyo Field Spaniel irudzi rwewe nemhuri yako. Pakukumbira kushoma ruzivo nezve hunhu, hudyu, maziso, uye thyroid yevabereki vese uye chero hama dzemwana wembwa kana imbwa yauri kutenga.
Kushaikwa kwematambudziko muvabereki uye vanin'ina zvakanyanya kunowedzera mikana yako yekutenga ruzha, yakajairwa imbwa.
Tarisa puppy inobuda uye ine hushamwari, iine chitarisiko chakazara chehutano hwakanaka. Kana zvichibvira, edza kushanyira marara usati waita sarudzo yako. Gara uine mhuka nyowani inoongororwa nachiremba mukati memaawa makumi maviri nemana kusvika makumi mana nemasere kuti uve nehutano.
Yekupedzisira Nhungamiro kune Muchena wechiGerman Mufudzi
Pitbull Inobereka & Mhando dzePitbulls - Rondedzero YEMAHARA Pitbull
yakakura sei chihuahua terrier mix ichawana
yakakura sei mufudzi weGerman shepherd lab mix achawana
yellow lab golden retriever puppies
mhumhi yechikadzi mazita ekuAmerica
yorkie uye shih tzu musanganiswa mutengo